दाद र जतिसुकै पुरानो दाग सजिलै निर्मुल पार्ने यो घरेलु उपाय, सेयर गरि सबैलाई जानकारी गरौ !
Homeरोचक / विचित्रदाद र जतिसुकै पुरानो दाग सजिलै निर्मुल पार्ने यो घरेलु उपाय, सेयर गरि सबैलाई जानकारी गरौ !
October 24, 2018 Spnews रोचक / विचित्र, स्वास्थ्य/विशेष Comments Off on दाद र जतिसुकै पुरानो दाग सजिलै निर्मुल पार्ने यो घरेलु उपाय, सेयर गरि सबैलाई जानकारी गरौ !
एजेन्सी । मानिसका शरीरका विभिन्न भाग, हात, पाखुरा, गर्दन, घाँटी वा अन्य भागमा चिलाएर रातै खटिरा आउने वा खटिरा पाकेर दाग बस्ने जस्ता समस्या आयो भने हामी यसलाई दाद भनिन्छ। शरीर चिलाएर रातो खटिरा आउने र निको भए पनि यसको दाग कहिल्यै हटेर नजाने समस्या एक आम समस्या हो ।
नरिवलको तेल, कपुर, कागती
यसरी लगाईसकेपछी करिब १५ मिनेट सम्म राख्नुहोस्। १५ मिनेट पछी धोएर तपाइँ संग दाद सम्बन्धी कुनै प्रकारको क्रिम छ भने लगाउनु होस् । यदि त्यस्तो कुनै क्रिम छैन भने ठिकै छ।यी सामग्रीहरु दाद अथवा फंगल इन्फेक्सनको लागि एक अचुक औषधी हो। यस्ता दाद, खटिराहरु पुरै निको नहुन्जेल यो विधि अपनाउनुहोस्।
दाद र जतिसुकै पुरानो दाग सजिलै निर्मुल पार्ने यो घरेलु उपाय
सेयर गरि सबैलाई जानकारी गरौ !
‘राष्ट्रपति भण्डारी आमा सरह हुन् टीका थाप्दा झूक्नु स्वभाविक रुपमा लिए’- नायिका करिष्मा
श्रीमती साट्ने प्रस्ताव ? बाहिरियो पारश र रामकृष्ण बिचको लफडा, यस्तो रहेछ सत्य (भिडियो)